राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि, कसको कति पुग्यो? - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि, कसको कति पुग्यो?
काठमाडौं, साउन १८ । सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसद्का दुवै सभाका सदस्यम्मको तलबभत्ता १८ प्रतिशतले बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।
सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा राष्ट्रसेवक (कर्मचारी) को तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायव सुब्बासम्मको २० र अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस शेख खालिफ कतारको नयाँ प्रधानमन्त्री बने
स्रोतअनुसार राष्ट्रध्यक्षको तलब मासिक २७ हजार ८१ लाख रुपैयाँ बढेको छ । राष्ट्रपतिको तलब १ लाख ५० हजार ४०० बाट बढेर १ लाख ७७ हजार ५३१ पुगेको छ । उपराष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ६ हजार ३० बाट बढेर १ लाख १५ हजार ११५ पुगेको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको तलव ७७ हजार २८० बाट बढेर ९१ हजार १९० पुगेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस प्रतिनिधिसभा नियमावलीः राष्ट्रपति निलम्बन हुने, सांसद नहुने
ट्याग्स: प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति